Iyo Beatles Catalog Inogona Hit Apple Music Iyi Kisimusi | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti ino Kisimusi vadikani veBeatles vachakwanisa kunakidzwa nenziyo dzeboka reLiverpool The Beatles zvakananga kuburikidza neApple Music, asi kwete chete kuburikidza navo, asi zvakare yakazara discography yeboka iri yaizosvikawo Spotify nePandora, huru yekufambisa mimhanzi masevhisi munyika.
Iyi nhau yakaburitswa nechinyorwa cheBillboard magazine, umo inotaura kuti mukati memazuva mashoma, Universal Studios inogona kusvika chibvumirano iine akasiyana masevhisi emimhanzi masevhisi ekupa iyo yakazara katarogu yeLiverpool mashanu.
Zvinhu zvese zvakanaka zvinotarisirwa uye neboka iri reBritish hazvigone kuve zvishoma. Pazuva rako, Vakatotora nguva yakareba kuti vasvike kuchitoro chemimhanzi cheTunes Apple, iyo yakaita saizvozvo muna 2010, nekubudirira kwekutengesa kusingatarisirwe nemunhu, nekuti vakatengesa anopfuura mamirioni maviri enziyo mumazuva ekutanga. Zuva rekuburitswa rakarongwa paApple Music, Spotify uye Pandora angave Zvita 24.
Ino nguva Apple haina kukwanisa kusvika kune imwe chete chibvumirano nemuridzi wekodzero, Universal Music, sekunge anga achikwanisa kusvika kuna Taylor Swift, uyo mushure mekukakavadzana kwekuti vanga vaine mazuva pamberi pekutanga kweApple Music, vakabatana kupfuura nakare kose uye humbowo hweichi ndicho chete kuvhurwa kweiyo yekupedzisira vhidhiyo yake 1989 World Tour, chete yeApple Music uye iTunes vashandisi.
Sezviri pachena Apple yakatoedza kupa katarogu yeboka iri isati yatanga kuratidzwa, asi gakava rakatenderedza nguva yemwedzi mitatu yemahara yakapihwa nepuratifomu, maimbofungidzirwa kuti hapana muimbi angabhadharisa, chled hurukuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Catalog yeBeatles inogona kurova Apple Music ino yeKisimusi
Apple Music inoenderera ichichinja kune vashandisi